ဂဲတ (ဖိနပ်) - ဝီကီပီးဒီးယား
ဂဲတ (下駄) သည် ဂျပန်ရိုးရာဖိနပ်တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ သစ်သား ကြိုင်းသိုင်းဖိနပ်တစ်မျိုး ဖြစ်ပြီး သာရေကြိုးဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။
၂ ဥတုကိုလိုက်၍ အသုံးပြုခြင်း
ဂဲတများကို အဓိကအားဖြင့် ယုခတနှင့် တွဲဖက်ကာ ဝတ်ဆင်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ အနောက်တိုင်းဝတ်စုံများနှင့်လည်း နွေရာသီကာလများတွင် ဝတ်ဆင်လေ့ရှိသည်။ ဂဲတကို ဂျပန်ရိုးရာဝတ်စုံများ၊ ပုံမှန်မဟုတ်သည် ဂျပန်ရိုးရာဝတ်စုံများ၊ အနောက်တိုင်းဝတ်စုံများနှင့် တွဲဖက်ကာ အသုံးပြုသော်လည်း ခြေအိတ်အသုံးပြုရန် မလိုအပ်ပေ။ မူလက လူများသည် တဘိများကို ဝတ်ဆင်သောအခါ ထုံးတမ်းအစဉ်အလာဖြစ်သည့် ဇိုးရိများနှင့် ဝတ်ဆင်လေ့ရှိသည်။
တစ်ခါတစ်ရံ ဂဲတများကို ခြေထောက်များ ခြောက်သွေ့နေစေရန်အတွက် မြင့်မားသည်များကို အသုံးပြုကြသည်။ ထို့ပြင် ဇိုးဘိကဲ့သို့သော အခြားသော ဖိနပ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါက ယိုစိမ့်မှုမရှိနိုင်ပေ။ ဤဖိနပ်များသည် လမ်းလျှောက်သည့်အခါတွင် တဖျတ်ဖျတ်မြည်သည့်အသံများ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ရေရှိသည့်နေရာနှင့် ညစ်ပတ်သည့်နေရာများတွင် လမ်းလျှောက်ပါက ခြေထောက်၏ နောက်ဘက်ကို ထိုအစက်များ စင်စေနိုင်သည်။ ဤသို့သော အရာများသည် ဂျပန်ရိုးရာ အလေးစားများကို အသုံးပြုမည်ဆိုပါက ဖြစ်မလာနိုင်ပေ။
ဂဲတများကို နှင်းထဲတွင်လည်း ဝတ်ဆင်ကြသည်။ နှင်းများထဲသို့ ဂဲတ၏ ခွာများသည် ထိုးဝင်သွားသဖြင့် ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ လမ်းလျှောက်ရာတွင် အခက်အခဲ ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ သို့သော်လည်း ဟိုးရှေးအခါက ညာဘက်တွင် ရှိသည့် ပုံထဲကအတိုင်းပင် ဂဲတများကို နှင်းထဲတွင်ပင် အသုံးပြုကြသည်။
Edo - the EDOPEDIA: geta wooden clogs Archived 21 February 2019 at the Wayback Machine.
Japan Footwear Museum(ဂျပန်)
The history of Japanese Geta Sandals Archived 29 May 2017 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂဲတ_(ဖိနပ်)&oldid=639180" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၁၄:၀၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။